2 Siyaabaha badbaadi Pictures ka MMS on iPhone in Computer ah
> Resource > iPhone > Sida loo badbaadi Pictures ka MMS on iPhone in Computer ah
Haddii aad qabto wax badan oo MMS aad iPhone, waxaad ogaan kartaa inaan ku lifaaqan sida sawirada ee MMS hore ma noqon karto si buuxda muxaafidka. Waa ay adag tahay in iyaga u arkaan on your iPhone, xitaa iyaga ku badbaadin si aad u computer noqon doonaa. Marka ay tani kugu dhacdo, ha iloobin in aad dib aad iPhone la Lugood hore, inkasta oo gurmad Lugood faylka la aqrin iyo aadan qaadan karin wax ka bixin. Si kastaba, waxa ay si ay uga badbaadaan xogta aad. Markaas hab lagu badbaadiyo sawirrada ka MMS aad iPhone heli.
Laba siyaabood oo loo badbaadiyo sawirrada ka iPhone MMS
Waxaa jira laba siyood oo aad ku badbaadin MMS sawiro ka iPhone, haddii aad isticmaasho Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) , kaas oo kuu ogolaanaya in aad si buuxda si loo badbaadiyo sawirrada ka MMS aad iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 ama iPhone 3GS. MMS sokow, Wondershare Dr.Fone ee macruufka kuu ogolaanaysaa inaad ka iPhone badbaadin fariimaha, xiriirada, qoraalo, camera kitaabkii duudduubnaa iyo sidaas si kombiyuutarka.
Waxba ma waxaad isticmaali dooran version Windows ama version Mac of Wondershare Dr.Fone ee macruufka, siyaabaha si loo badbaadiyo MMS sawiro ka iPhone la mid yihiin. Hoos waxaa ku qoran, aynu wada isku day version Windows ah.
Qaybta 1aad: Si toos ah iskaan iyo badbaadin sawiro ka MMS on iPhone in computer
Qeybta 2: Waraaqda Lugood gurmad ah si loo badbaadiyo sawirrada ka MMS on iPhone
Qaybta 1aad: Si toos ah badbaadin sawiro ka MMS on iPhone 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4s / 4 / 3GS in computer
Tallaabada 1. Ku rakib iyo abuurtaan barnaamijka on your computer
Ku rakib barnaamijka ka dib markii ay soo degsado, ka dibna uu u bilaabi on your computer. Suuqa ayaa aasaasiga ah ku tusi doonaa sida soo socota.
Waxa kale oo aad ka badalan karaa in hab sare haddii aad rabto. Just guji buttom buluuga ah meesha ugu hooseysa ee suuqa. Markaasay aad arki doonaa suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone inay soo galaan hab iskaanka ah
Wixii 6 iPhone Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4s users, kaliya aad u baahan tahay si ay u riix "Start Scan" badhanka si ay u bilaabaan baaritaan ah. Wixii kale ee isticmaala iPhone, waxaad u baahan tahay in ay galaan hab iskaanka ka dib markii xira iPhone in computer isagoo raacaya habka hoos ku qoran:
Ka dib waxa ay samaynayaan, barnaamijka la bilaabaa aad ka baareyso iPhone sida soo socota.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo badbaadin sawiro ka MMS aad iPhone
Marka scan dhamaado, waxaad arki doonaa warbixin ku saabsan suuqa kala scan hoose. Halkan, dhammaan xogta laga helay aad iPhone ay si fiican u kala saaraa. Wixii MMS, waxaad riixi kartaa "Messages" in ay ku eegaan waxyaabaha ku faahfaahsan. Wixii kaliya sawiro ka MMS ah, waxaad dooran kartaa "Lifaaq Message". Markaas dooran waxa aad rabto iyo waxaan iyaga ku badbaadin on your computer adigoo gujinaya "Ladnaansho".
Fiiro gaar ah: In sidan, waxaa barnaamijka sidoo kale ka heli MMS dhawaan tirtiray, oo ay ku jiraan ku lifaaqan ah. Haddii aad rabto in aad u kala sooci, waxaad isticmaali kartaa badhanka dusheeda: bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya.
Qeybta 2: Waraaqda Lugood gurmad ah si loo badbaadiyo sawirrada ka MMS on iPhone 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4s / 4 / 3GS
Haddii aad doorato sidan, waxaa ku tiirsan Lugood. Waxaad u baahan tahay inaad u hagaagsan aad iPhone la Lugood si ay u sameeyaan gurmad Lugood ah on your computer. Gurmad ma loo arki karaa, laakiin waxaad ka arki kartaa oo isticmaali content ku dhex jira ka dib markii ay soo saarida.
Kadib markii ay Wondershare Dr.Fone ee software macruufka, waa in aad dareentay in ay jiraan laba fursadaha on sare ee daaqadda. Taasi waa xaq. Markan, aynu isku dayi mid kale, ka soo kabsado Lugood File kaabta ".
Marka aad iska badasho si ikhtiyaar kale, barnaamijka si toos ah u heli doontaa dhammaan Lugood files gurmad on your computer iyo iyaga muujiyaan sida soo socota. Mid ka mid ah si aad u iPhone Dooro oo guji "Start Scan" si ay u soo saaro.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo sawiro ka iPhone MMS badbaadin your computer
Marka scan ay ka badan tahay, waxaad heli doontaa warbixin scan sida soo socota. Dhab ahaantii, waxa ay la mid ah talaabada ugu danbeysay ee Qaybta 1 kor ku xusan. Waxaad ku eegaan kartaa MMS ku jira oo dhan halkan adigoo gujinaya "Messages" dhinaca bidix ee suuqa. Kaliya photos Falanqeynta ka MMS, waxaad dooran kartaa "Lifaaq Message". Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.